Umshuwalense kanye essence yayo
Omunye omdala party ubudlelwano ukukhiqizwa futhi umphakathi uhlamvu umshwalense. Umsuka walo kumele wafuna ezinsukwini kohlelo senceku. Sabe ukuthathelwa umshuwalense impahla nezigqila ekubhujisweni okwabangelwa amandla emvelo ahlukahlukene noma ezinye izimo. Kancane kancane kuvele Inhlangano yabantu abanesifiso inqubo. Kube ibhizinisi umshwalense.
Lona omunye izikhungo eyinhloko emnothweni. I umshwalense ibhizinisi kabanzi kunazo yazuza nezimo zezimakethe.
Ingqikithi yale nqubo ukuhlangabezana nezidingo womuntu ukuze uthole ukuvikeleka. Ngaphansi kwezimo emakethe, umshwalense isibe kumiswa ukuhluka. Kuyindlela imali bahlangane ukuze bakwazi ukusebenzisa zabo kahle.
ibhizinisi Umshwalense udlala indima ebalulekile emnothweni. Lokhu, ngaphezu kwakho konke, ukwandisa umthamo wezwe ukutshala sokugcwaliseka kwaso. Ukuthembeka kanye nokuvikeleka iziqinisekiso ukuheha dolobha olwengeziwe.
Umshwalense ibhizinisi - imfuneko ukukhula inhlalakahle zesizwe. Lokhu kusinikeza ithuba ekulinganiseni uhlelo zokuvikeleka kwezenhlalakahle kanye izimpesheni.
I umshwalense kungaphansi kwemithetho yayo futhi inezici ezithile ukuthuthukiswa.
It ihlukaniswe yaba umshwalense impahla, icala futhi siqu. Endaweni ehlukile, ungakhetha indawo yenqubo ehambisana ne-imithi. Ngaphansi isigaba umshwalense kuhlanganisa izinto abe nezici ezilandelayo:
1. khona ingozi umshwalense.
2. Hlanganisa yamalungu futhi izinkampani zomshuwalense.
3. Mann le nqubo.
4. ubuhlobo Unallocated.
Into yomshuwalense izingozi, uma kwenzeka ukuthi umshwalense ubophekile ukuba nxephezela yomonakalo. Njengoba into ongakhonza ezihlukahlukene izigaba.
umshwalense Siqu kuhlanganisa izithakazelo izakhamuzi, eziphathelene yobudala zindlela, izenzakalo ezithile ekuphileni kwakhe, ububanzi kwezinsizakalo zempilo, isifo, kanye nezinye izenzakalo. Ngo umshwalense siqu - kuba ukuphila nempilo izakhamuzi, kanye ukukwazi kwabo ukusebenza.
Lapho insuring impahla, izinto zinobude iyiphi ukuziphatha amafomu impahla ezihlangabezana nenqubo yenqubo. Lokhu kungaba ifa impahla ethile, kanye nokusebenzisa kwayo nokuchithwa. Lokhu kuhlanganisa isibopho sezomthetho umshwalense, okuyinto ukuba akhokhe isinxephezelo abanye ngenxa yomonakalo. umsebenzi ebhizinisi futhi uwela kulesi sigaba sama-izifundo.
Elinye iphuzu, okubandakanya umshwalense, kuhilela iphakethe kwemibhalo ezidingekile indawo okuvela kuyo icala isinxephezelo.
Izihloko ibhizinisi umshwalense - ke sika ejenti, izinhlangano, imiphakathi, broker abanye abahlanganyeli kule nqubo.
Zonke imisebenzi izinhlangano kumele ilayisensi noma eqinisekisiwe. Kukhona irejista isimo ekhethekile, equkethe lonke uhlu abahlanganyeli kule nqubo.
Umshwalense kuyingxenye ebalulekile yokuphila komphakathi kwanoma yimaphi izwe nomnotho athuthukile. Kuyinto isiqinisekiso ukuzinza, okuyinto enomthelela ukuthuthukiswa utshalomali. Abanikazi impahla kanye nezimali kudingeka siqiniseke ukuthi uma umcimbi insured bayobizwa ibuyiselwe umonakalo.
ERussia, ibhizinisi umshwalense ifikile ibanga elide yentuthuko. Kodwa inqubo lasungulwa akuyona isiqediwe futhi namuhla. Ngo-1996 yaba isinqumo okuyinto ezibekwe ukuthuthukiswa izinyathelo emakethe umshwalense eRussia. Ngo-1997 bamukela uhlelo sokuthuthukiswa yomshuwalense ingozi, okubangelwa izibhicongo global, izinhlekelele zemvelo nezinye izimo ezifanayo.
Hydrochloric acid: physico-chemical izakhiwo, ukulungiswa nokusetshenziswa
Annelids: incazelo emfushane uhlobo
Amazinga ukuncibilika igolide. ukuncibilika ukubila lokushisa metal
Isayensi Biology: kuzithinta - uphakathi nendawo ngomzimba isilwane
Ukugeleza Pyroclastic. ukuqhuma
Zingaki izinkanyezi ifulege US?
Indlela ukuthunga ingubo ngaphandle iphethini isitayela Greek
HPP Ust-Ilim: isithombe, ikheli. Ukwakhiwa kwe-Ust-Ilim esiteshini emifula
Immortelle. ayelapha kanye nezicelo
I-Webcam Defender model G-LENS 2552 - inani eliphelele lemali!
Crochet Unseparated - elula futhi elula!
Isiphequluli ngokwayo uqalise nge ukukhangisa: kungenzeka izimbangela futhi ukuxazulula le nkinga
Kanjani ukwenza amapayipi zethusi lwavutha
Ukuziletha imikhiqizo emisha evela e-Microsoft - smartphone Lumia 940
Income kwamangqamuzana kanye nethonya layo phezu umthengi emakethe lesifunda